दलन भित्रको जलन | langtangnews.com
२०५८ साल माघ २७ गते घरमा माओवादीहरू गोली गठ्ठासहित आए। चार घरमा माओवादी सेनाहरू बाँडिएर बसे। घरमा साँझको खाना खाने तरखरमा थियौँ। हजुरबाले सोध्नुभयो। नाम, थर अनि गोत्र। एक जना माओवादी सेनाले ‘विक’ थर बताए। हजुरबाले घर भित्रबाट बाहिर निस्कन बाध्य पार्नुभयो।
पहिले हाम्रो कपडा सिलाई दिने मुरली काका हुनुहुन्थ्यो। बालीघरे प्रथा थियो। अहिले बालीमा कपडा सिलाउँदैनौँ। बालीघरे प्रथा हटेको छ। दलितले मात्र होइन, अहिले बाहुन-क्षेत्री सबैले कपडा सिलाई बुनाई सिकेका छन्। पेशा व्यवसायको रूपमा गर्न पनि थालेका छन्। मैले बुझ्दा कथित उपल्लो जातले कपडा सिलाउनेलाई ‘दमाई’ भन्थे। फलाम चुट्नेलाई ‘कामी’ भन्थे। जुत्ता सिलाउनेलाई ‘सार्की’ भन्थे। अहिले के ती कपडा सिलाउने बाहुन-क्षेत्रीका छोराछोरी, बुहारी सबै दमाई भए त?
ब्राह्मणहरूलाई ठूलो जात भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध र समर्थन गर्ने धेरै भए। हामीले नै सानो र ठूलो जात भन्ने हो भने समाजमा कसरी छुवाछुत र जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ? त्यसैले सामाजिक सद्भावसँगै पीडितलाई न्याय र जातीय छुवाछूत अन्त्यको लागि सबै लाग्नु जरूरी छ। सेताेपाटीबाट